Ndị ọkàiwu na-agbakọ ụgwọ International na Netherlands - Law & More
Ị na -achọ onye ọka iwu na -anakọta ụgwọ na NETHERLANDS?
ANY L ANYAW EGO NA-EKWUTA N'INLỌ NCHE
Ejiri anyị rụ ọrụ maka ndị ahịa obodo na mba ofesi.
Ọkwa ọrụ dị elu maka ndị ahịa ọ bụla, ndị mmadụ n'otu n'otu yana ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ.
Anyị dị. Nakwa taa.
MA Ọ B C Kpọọ + 31 40 369 06 80
Onye ọka iwu nchịkọta ụgwọ
Nchoputa gosiputara na 30% nke mbufu na Netherlands na-akpata site na akwukwo ugwo a na-adighi akwughi ya. Companylọ ọrụ gị nwere onye ahịa nke na-akwụbeghị ụgwọ? Ma obu onwere gi onwe gi ma enwere onye ji gi ego o ji gi ego? Mgbe ahụ kpọtụrụ Law & More ndị ọka iwu na-anakọta ụgwọ. Anyị ghọtara na akwụkwọ ọnụahịa a na-akwụghị ụgwọ na-akpasu iwe na enweghị mmasị, ọ bụ ya mere anyị ji enyere gị aka site na mmalite ruo na njedebe nke usoro nchịkọta. Ndị ọka iwu anyị na-anakọta ụgwọ ga-eso gị ma usoro ịnakọta ego na usoro ikpe ikpe. Law & More makwaara na iwu nke ikikọ ya ma nwee ike inyere gị aka mgbe ị kwụsịrị odida. N'ikpeazụ, ọ nweghị ihe dị iche nye anyị ma onye ji ya ụgwọ bi na Netherlands ma ọ bụ ka e guzobere ya ná mba ọzọ. N'ihi agbụrụ anyị sitere na mba ụwa, anyị tozuru oke maka mgbagha agbagha, esemokwu ma ọ bụ karịa.
A bịa na ịnakọta ụgwọ, ikekwe ị na-eche maka ụlọ ọrụ na-anakọta ụgwọ ma ọ bụ onye ọrụ enyemaka karịa nke ọka iwu na-anakọta ụgwọ. Nke a bụ n'ihi na ndị otu atọ ahụ nwere ike ịnakọta ụgwọ ndị pụtara ìhè. Agbanyeghị, enwere usoro dị mkpa na usoro nnakọta nke ndị ọka iwu na-anakọta ụgwọ ga-ebu n'ozuzu ya:
Law & More dị Mọnde ruo Fraịde site na 08:00 ruo 22:00 yana ngwụsị izu site na 09:00 ruo 17:00
Ndị ọka iwu anyị na-ege ntị n'okwu gị ma wepụta atụmatụ kwesịrị ekwesị maka ịme ihe
"Enweela m ndụmọdụ ndị ọkachamara n'etiti oge a kwadoro."
Nzọụkwụ-usoro maka usoro nchịkọta ụgwọ
1. Oge udo. Ọ bụrụ na a na -anakọta nkwupụta gị, mgbe ahụ ndị ọka iwu nchịkọta ụgwọ ga -ebu ụzọ malite usoro udo Law & More. N'ime oge a, anyị na -anwa ime ka onye ji ụgwọ kwụọ ụgwọ site na akwụkwọ ozi na/ma ọ bụ oku ekwentị, ikekwe mụbara ya na ọmụrụ nwa nke iwu yana ụgwọ nnakọta na -akwụghị ụgwọ.
2. Mkparịta ụka. Ị nwere ezi mmekọrịta gị na onye otu gị, ọ ga -amasị gị ijigide ezi mmekọrịta a? N'oge a, anyị na -agba mbọ iru nkwekọrịta n'etiti ndị ọzọ site na mkparịta ụka na, dịka ọmụmaatụ, mee nhazi ịkwụ ụgwọ.
3. Usoro ikpe. Ịgabiga usoro udo adịghị mkpa. Ọ bụrụ na onye ji gị ụgwọ anaghị akwado, ndị ọka iwu nchịkọta ụgwọ anyị nwere ike ịdepụta akwụkwọ ịkpọ oku zigara onye ji gị ụgwọ. Site na akwụkwọ ịkpọ oku, a ga -akpọ onye ahụ ji ụgwọ ka ọ bịa n'ụlọ ikpe n'otu ụbọchị. N'ime usoro iwu, anyị na -ekwu na anyị kwụrụ ụgwọ ego pụtara ìhè na ụgwọ nnakọta n'ihu ụlọ ikpe.
4. Mkpebi ahụ. Mgbe onye ji gị ụgwọ nwetachara akwụkwọ ịkpọ oku ahụ, a ga -enye ya ohere ịzaghachi akwụkwọ ịkpọ oku ahụ na ederede. Ọ bụrụ na onye ji ụgwọ azaghị ya ma ọ pụtaghị na ikpe ahụ, onye ọka ikpe ga -ekpebi ikpe na anọghị ya ebe ọ ga -eme nkwupụta gị. Nke a pụtara na onye ji gị ụgwọ ga -akwụrịrị akwụkwọ ọnụahịa, ọmụrụ nwa nke iwu, ụgwọ nnakọta yana ụgwọ usoro. Mgbe onye ọka ikpe kwuchara mkpebi ikpe, onye ọka iwu ga -ekpe ikpe a n'aka onye ji ya ụgwọ.
5. Mkpebi ahụ. Tupu ịmalite usoro ikpe, ọ ga -ekwe omume ijide ihe onye ji ụgwọ. A na -akpọ nke a njikọkọ nchekwa. Ebumnuche mgbakwunye nchekwa bụ iji hụ na onye ji ụgwọ enweghị ike iwepu akụ ọ bụla tupu onye ọka ikpe emee mkpebi, ka ị nwee ike weghachite ụgwọ gị n'aka onye ji ụgwọ. Ọ bụrụ na onye ọka ikpe kweta ihe ị na-ekwu, a ga-atụgharị mgbakwunye mgbakwunye ikpe ka ọ bụrụ mgbakwunye mgbakwunye. Nke a pụtara na akụ nke ejirila nwere ike ree ya n'ihu ọha site na onye na -akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na onye ji ya ụgwọ akwụghị ụgwọ. A ga -eji ego nke akụ ndị a kwụọ ụgwọ gị.
Ịbịaru onye ọka iwu na -anakọta ụgwọ
A ga -emerịrị usoro ndị akọwara n'elu maka usoro nchịkọta ọ bụla. Mana kedu ihe ị ga -atụ anya ya Law & MoreNdị ọka iwu nchịkọta ụgwọ mgbe ị na -eme usoro ndị a?
• Nyocha na ndụmọdụ gbasara ọnọdụ iwu gị
• Kpọtụrụ kpọmkwem na nkeonwe, ma site na ekwentị na ozi-e
• Ogo na itinye aka
• Mee ihe ma zaghachi ngwa ngwa yana rụọ ọrụ nke ọma
• Ịnọdụ n'elu ikpe
• Na -ebu ụzọ chee echiche ma kwadebe mmemme ndị ọzọ
Onye ọka iwu nchịkọta ụgwọ ọrụ
• Nyochaa usoro ịkwụ ụgwọ yana nyochaa akwụkwọ ọnụahịa
• Mkparịta ụka na ndị ji ụgwọ
• Ịdepụta na izipu ọkwa nke ndabara
• Mgbochi ndenye ọgwụ na iji nkwụsị
• Ịdepụta akwụkwọ ịkpọ oku
• Ịga usoro ikpe
• Ịnara na imezu ogbugbu
• Ijikwa okwu nnakọta ụgwọ mba ofesi
Gịnị bụ iwu nchịkọta ụgwọ?
Iwu nnakọta ụgwọ na Netherlands na -ekwu maka mkpokọta ego (enweghị ikike). Mgbe ị na -enyefe ndị ọka iwu na -anakọta ụgwọ akwụkwọ ọnụahịa pụrụ iche, ị na -enye ndị ọka iwu nchịkọta ụgwọ ụgwọ ikike dị ka iwu nnakọta ụgwọ si anakọta ebubo gị pụtara ìhè. Dịka ọmụmaatụ, nke a bụ ohere maka ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ụlọ ọrụ nwere obere oge n'onwe ha ma ọ bụ na -achọ ilekwasị anya na isi azụmaahịa ha. Na mgbakwunye, a na -etinye ụdị iwu niile na (nchịkọta) akwụkwọ ọnụahịa pụrụ iche, dịka ọmụmaatụ gbasara ọpụpụ na ndenye ọgwụ, yana enwere ọtụtụ ndị ọzọ metụtara. Nke a na -eme ka iwu nchịkọta ụgwọ dị ụtọ, mana dị mgbagwoju anya. Ọ bụ ya mere ọ ga -eji dị mma itinye onye ọka iwu na -anakọta ụgwọ mgbe ị nwere ebubo pụtara ìhè. Law & MoreNdị ọka iwu bụ ndị ọkachamara n'ihe gbasara iwu ịnakọta ụgwọ ma nwee obi ụtọ inyere gị aka.
Gịnị bụ ọkwa nke ndabara?
Nzọụkwụ mbụ a ga -emerịrị bụ ịgwa onye ji ụgwọ na ọ mezubeghị ụgwọ ịkwụ ụgwọ ya. Ị ga -enye ya ohere ịkwụ ụgwọ n'ime oge ezi uche na -enweghị akwụ ụgwọ ọzọ. Ị na -ezigara onye ji ụgwọ ihe ncheta echekwara edere, nke a ka a na -akpọ ọkwa ndabara. A na -ewerekarị ụbọchị iri na anọ dị ka oge ezi uche dị na ya nke a ga -arịọ onye ji ụgwọ ka ọ kwụọ ụgwọ ahụ. Dị ka o kwesịrị ịdị, Law & MoreNdị ọka iwu na -anakọta ụgwọ nwere ike ịkwadebere gị ọkwa nke adịghị mma. Ọ bụrụ na -eziteghị ọkwa nke ndabara, ụlọ ikpe ga -ajụ ebubo ọ bụla maka mmebi. Agbanyeghị, enwere ọnọdụ ebe izipu ọkwa adịghị ka ọ dị mkpa, dịka ọmụmaatụ mmezu nke nkwekọrịta ahụ agaghị ekwe omume. Ka o sina dị, ọ dị mma ka ị na -ezipụ ọkwa nke ndabara mgbe niile ka ijide n'aka. Ọ bụrụ na ekwenyeghị arịrịọ ịkwụ ụgwọ, anyị nwere ike bido usoro nnakọta.
Kedu ozi onye ọka iwu nchịkọta ụgwọ chọrọ?
• Nkọwa nke onye ji ụgwọ na onye ji ya ụgwọ
• Akwụkwọ metụtara ụgwọ (nọmba akwụkwọ ọnụahịa na ụbọchị)
• Ihe kpatara akwụbeghị ụgwọ ahụ
• Nkwekọrịta ma ọ bụ ndokwa ndị ọzọ nke ụgwọ ahụ metụtara
• Nkọwa doro anya na izi ezi nke ego o ji
• Mmekọrịta ọbụla dị n'etiti onye nbinye na onye ji ụgwọ gbasara ụgwọ ahụ
Na -egbochi ihe egwu: kedu ka esi eme nke ahụ?
Law & More na -enyekwa nkwado iji gbochie ihe egwu metụtara ịkwụ ụgwọ na ịkwụ ụgwọ oge. Dịka ọmụmaatụ, anyị na -adụ ndị ahịa ọdụ ka ha tinye ọnọdụ ịkwụ ụgwọ n'ozuzu ha na ọnọdụ nwere ike igbochi ihe edoghị anya ma ọ bụrụ na ịkwụcha ụgwọ n'oge. Ị ga -achọ ozi ndị ọzọ gbasara nke a? Biko kpọtụrụ ndị ọka iwu nchịkọta nke Law & More.
Onye ji ụgwọ dabere na mba ofesi?
Onye ji gị ụgwọ nọ na mba ofesi? N'ọnọdụ ahụ, ihe dị iche iche nwere ike rụọ ọrụ, dị ka asụsụ dị iche iche, ọdịbendị na omume ịkwụ ụgwọ, nke pụtara na ihe egwu dị na ọnọdụ usoro nnakọta dị ukwuu karịa ndị ji ụgwọ si obodo ha. Agbanyeghị, maka ndị ọka iwu na -anakọta ụgwọ nke Law & More, ihe ndị a anaghị abụ ihe mgbochi. Anyị agaghị ekwe ka ókèala kwụsị anyị, yabụ anyị nwere obi ụtọ iduzi gị site na usoro nnakọta nke onye ji ụgwọ hiwere onwe ya na mba ofesi, na ma ọ bụ na mpụga Europe. Ọ ga -amasị gị ịmara ihe anyị nwere ike imere gị mgbe gị na onye ji ụgwọ si mba ọzọ na -emekọ ihe? Biko kpọtụrụ Law & More. Ndị ọka iwu anyị ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka.